ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: 2007
ရင်ဖွင့်ပါရစေ ကျွန်မရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးရေ …….
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက်နဲ. စိတ်မကောင်းဖြစ်၊ မျက်ရည်ကျရပြန်ပြီ …..
ကျွန်မ ထင်ထားတဲ့၊ ယူဆထားတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်လောက်ဘူးထင်လို့ လုပ်မိတဲ့ အလုပ်က သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ပါ …..ခုတစ်ကြိမ်နဲ့ပါဆိုရင် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ရှိသွားပြီ ။ ကျွန်မစိတ်ထဲ တော်တော်ထိခိုက်ပါတယ် …..သူတို့ကိုတောင်းပန်လိုက်ရုံနဲ့ သူတို့တွေ စိတ်ထဲမှာ တကယ်ကျေနပ်သွားကြရဲ့ လား ကျွန်မ မသိနိုင်ပါဘူး …..
ကျွန်မ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်၊ ဆုံးမနေမိတယ် …. ကျွန်မက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ရင် တကယ်ကောင်းချင်ခဲ့သူပါ …. ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်မကြောင့် ဘယ်သူ့ကို မှ စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး ။
ငါသာဆိုရင် ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ အမြဲတွေးတတ်တဲ. ကျွန်မ ၊ ကျွန်မစိတ်နဲ.နှိုင်းပြီး အရာရာကို ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိတယ် ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခံစားချက်ခြင်း မတူနိုင်တာ ကျွန်မမေ့နေမိတယ် ….
ခုတော့ သူငယ်ချင်းစိတ်ထဲလည်း ကသိကအောင့်ဖြစ် ၊ ကျွန်မလဲ စိတ်ဆင်းရဲရတယ် …..
Posted by ကြယ်ပြာ at 4:17 AM0comments Links to this post
ဇာပုဝါ ခြုံထားတဲ့ ချစ်စရာ့ မနက်ခင်းရေ
ငါ့ရဲ့ချစ်သူက ဟိုးအဝေးကြီးမှာ …..
မင်းရဲ့ လန်းဆန်းတဲ့အလှကို ခံစားရင်း
Posted by ကြယ်ပြာ at 2:33 AM0comments Links to this post
တိတ်တဆိတ် ငိုချင်းချနေလေရဲ့ …..
သာတယ် နာတယ် မတွက်မိပေမယ့်
“နာကျင်လိုက်တာ” လို့ ခပ်တိုးတိုးငြီးနေတာ ကြားရလိမ့်မယ် ……
Posted by ကြယ်ပြာ at 2:00 AM 1 comments Links to this post